News - Waraaqaha looxa
Marka loo eego falanqaynta MRFR, Suuqa Waraaqaha Caalamiga ah ee loo yaqaan 'Acrylic Sheets Market' ayaa la saadaalinayaa in la diiwaan geliyo CAGR ka badan 5.5% si loo gaadho qiimaha kudhowaad USD 6 Billion illaa 2027.
Acrylic waa shey balaastig ah oo hufan oo leh awood aad u fiican, qallafsanaan, iyo muuqaal cad. Xaashidu way fududahay in la been-abuuro, waxay si fiican ugu xidhan tahay xabagyo iyo dareerayaal, wayna fududahay in lagu diiriyo heer kul. Maaddadu waxay leedahay sifooyin cimiladeed oo heer sare ah marka la barbar dhigo caagag badan oo hufan.
Xaashida looxa waxay soo bandhigeysaa astaamo u eg muraayad sida cad, dhalaal, iyo hufnaan. Waa mid khafiif ah oo leh iska caabin saameyn sare leh marka loo eego muraayadda. Xaashida looxa waxaa loo yaqaan magacyo badan sida acrylic, glass acrylic, and plexiglass.
Suuqa xaashiyaha loo yaqaan 'acrylic sheets' waxaa ugu horreyn loo adeegsadaa adeegsiga dhismaha & dhismaha ee loogu talagalay codsiyo kala duwan sida mashaariicda hagaajinta guriga, dhaldhalaalka jikada, daaqadaha, qeybaha derbiga, iyo qalabka guryaha iyo qurxinta, iyo kuwo kale. Xaashida looxa loo yaqaan 'Acrylic sheets' ayaa ah xulashada ugu fiican ee walxaha iyada oo ay ugu wacan tahay sifooyinka sare sida iftiinka indhaha oo aad u fiican, 17 jeer saamayn ku yeelashada iska caabin marka loo eego muraayadda, miisaanka fudud, heerkulka, iyo iska caabinta kiimikada.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa muraayadaha ganacsiga iyo dhismaha si loo abuuro cimilo iyo daaqado u adkeysata duufaanka, daaqadaha waaweyn iyo kuwa rasaasta celiya, iyo nalalka cirka ee waara.
Ciyaartoyda ka shaqeysa suuqan waxay diiradda saarayaan dadaallada istiraatiijiyadeed ee kala duwan sida ballaarinta iyo soosaarida wax soo saarka. Tusaale ahaan, bishii Abriil 2020, waxay kordhisay soosaarka waraaqaha acrylic-ka hufan 300% si ay u taageerto been abuurka darbiyada ilaalinta nadaafadda ee Boqortooyada Midowday ee UK iyo waddamada kale ee Yurub iyadoo laga jawaabayo baahida sii kordheysa ee looga ilaalinayo cudurka faafa ee COVID-19.
ASTM D4802 wuxuu qeexayaa tilmaamaha soo saarida xaashiyaha akriliyada ee habab kala duwan. Si kastaba ha noqotee, waraaqaha acrylic sheet waxaa ka mid ah vinyl acetate ama methyl acrylate, kuwaas oo ah fiilooyin synthetic laga sameeyay polymer (polyacrylonitrile). Xeerarka ku saabsan caafimaadka iyo dhibaatooyinka deegaanka ee alaabtan ceyriinka ah waxay saameyn ku yeelanayaan soo saarista iyo isticmaalka go'yaasha looxa.
•Xaashida Acrylic Extruded: Waraaqahaani waa kuwo tayo ahaan ka hooseeya marka loo eego xaashiyaha looxa la tuuro, laakiin waxay leeyihiin seddex jeer ka adkaysi badan caabbinta inta badan muraayadda daaqadda daaqadda ah ee xoogga leh haddana miisaankoodu ugu yaraan kala badh yahay. Waxay si fiican ugu shaqeeyaan kiisaska bandhiga, laydhka, calaamadaha, iyo qaabaynta, iyo sidoo kale codsiyo kale oo badan. Go'yaduhu waxay noqon karaan midab midab leh ama midab dhalaalaya, iyadoo kuxiran baahida loo qabo, waxayna noqon doontaa hurdi ama way libdhi doontaa waqti.
•Xaashida looxa looxa: looxa looxa waa khafiif, saameyn adkaysi u, iyo sheet waara. Si fudud ayaa loogu been abuurikaraa qaab kasta oo la doonayo, wuxuu ku yimaadaa midabbo badan, cabirro, dhumuc, iyo dhammeystir, wuxuuna si fiican ugu shaqeeyaa wax kasta oo ka socda kiisaska bandhigga illaa daaqadaha Qaybta waxaa loo sii qaybiyaa xaashida acrylic cell iyo waraaqo akrilik ah oo joogto ah.